Fanapahana navoakan’ny HCC : Manosika ny Filoha hanitsaka ny lalàm-panorenana -
AccueilRaharaham-pirenenaFanapahana navoakan’ny HCC : Manosika ny Filoha hanitsaka ny lalàm-panorenana
01/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Momba ny fandravana ny governemanta:
Ny andininy faha-4, ao anatin’ilay fanapahana laharana 18-HCC/D3 tamin’ny 25 mey 2018, momba ilay fitoriana ny fanesorana ny Filoham-pirenena amin’ny asany, dia mazava fa “ ny filoham-pirenena no manana fahefana mandrava ny governamanta”. Milaza kosa anefa ny andininy faha-24, andalana faharoa ao anatin’ny lalàm-panorenana, fa “ny filohan’ny repoblika no manam-pahefana manala na manolo ny praiminisitra amin’ny asany, raha toa ka ireto no mitranga: fametraham-pialan’ny governemanta, na nahavita fahadisoana goavana, na ihany koa noho ny sakana tsy ahafahany manatanteraka ny asany intsony.
Hatreto anefa, mbola tsy nametra-pialana ny praiminisitra, ary mbola tsy nahitana io fanaovana fahadisoana goavana io ihany koa. Manosika ny Filoham-pirenena hanitsakitsaka ny lalàm-panorenana araka izany ny HCC, tamin’ny alalan’iny didy navoakany momba ny fananganana governemanta vaovao iny.
Momba ny fandravana ny Antenimieram-pirenena:
Ny andininy faha-11 ao anatin’io fanapahana navoakan’ny HCC laharana fahna 18-HCC/D3 tamin’ny 25 mey 2018 ihany koa dia milaza fa “ ny tsy afaka mampihatra ny andininy faha- 60, andalana voalohany ao anatin’ny lalàm-panorenana ny Filoham-pirenena, fa miandry ampitoniana ny fahataperan’ny fe-potoam-piasana ireo parlemantera ankehitriny. Mazava anefa ny voalazan’ny lalàm-panorenana ao anatin’io andininy faha- 60, andalana voalohany io, fa “ afaka mandrava ny antenimieram-pirenena ny Filoham-pirenena”mandeha ila ihany araka izany ny fanapahana navoakan’ny HCC, ary miendrika fanaparam-pahefana raha ity fanakanany ny Filoha tsy hampihatra ny fahefana nomen’ny lalàm-panorenana azy ity. Marihina anefa fa tsy misy afa-tsy ny fanaovana fitsapan-kevi-bahoaka ihany no ahafahana manova, na manampy ny lalàm-panorenana.
Araka ny voalazan’ny lalàm-panorenana ao amin’ny andininy faha-46, andalana faharoa ao anatin’ny lalàm-panorenana, dia ny hoe” mametra-pialana 60 andro mialohan’ny datim-pifidianana izay filoham-pirenena am-perinasa mbola mikasa ny hilatsaka hofidiana mandritra ny fifidianana filoham-pirenena manaraka”.
Ilay fanapahana laharana faha 18-HCC/D3 tamin’ny 25 mey 2018 navoakan’ny HCC anefa dia namaritra mazava tsara fa “ mametra-pialana 60 andro mialoh’ny daty hanaovana ny fihodinana voalohany ny Filoham-pirenena ankehitriny raha toa ka mbola hilatsaka hofidiana amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ity taona 2018 ity”. Tranga izay mahagaga, satria vitan’ny HCC izany no nanova, na nanampy izay voalazan’ny lalàm-panorenana, tamin’ny alalan’ny famoahany ity fanapahana ity.
Eo amin’ireo dingana arahina amin’ny fanendrena ny praiminisitry ny marimaritra iraisana.
Mazava tsara ny voalazan’ny andininy fahefatra ao anatin’ilay fanapahana laharana faha-18-HCC/D3 tamin’ny 25 mey 2018, fa “ ny filohan’ny repoblika ny manao ny fanendrena ny praiminisitry ny marimaritra iraisana, amin’ny alalan’ny fanomezana lisitra anarana miisa telo fara fahakeliny, ary mifanaraka amin’ny andininy faha- 54 ao anatin’ny lalàm-panorenana, sy amin’ilay hevitra laharana faha 01-HCC/AV ny 17 Febroary 2014, izay nitondra ny fandikana ny andininy faha- 54 ao anatin’ny lalàm-panorenana”. Hevitra izay mifanohitra amin’ilay fanapahana laharana faha 12-HCC/D3 navoakan’ny HCC tamin’ny 11 Febroary2015, momba ny famaritana ilay antsoina hoe maro an’isa eny anivon’ny antenimieram-pirenena. Izany notoherin’ny HCC tamin’ny alalan’ny fanehoan-kevitra izany ny fanapahana izay didy tsy azo hivalozana navoakan’izy ireo araka io tranga io. Na izany aza dia mazava ny voalaza fa izay maro an’isa eny anivon’ny antenimieram-pirenena no manolotra ny anaran’ny praiminisitra hotendren’ny Filoham-pirenena. Izany hoe tokony hifandamina araka izany, ary hijery izay marimaritra iraisana ireo solombavambahoaka eny anivon’ny antenimiera ankehitriny, ahafahana mamaritra izay anarana hatolotra hirosoan’ny Filoham-pirenena amin’ny fanendrena. Tsy misy lanjany ihany koa araka izany ny fampihaon’ny CFM ireo filoha teo aloha sy ankehitriny hamaritana izay olona hotendrena ho eo amin’ny toeran’ny praiminisitry ny marimaritra iraisana, izay mandeha nanomboka omaly.
Momba ny fananganana ny Fitsarana avo na ny HCJ
Araka ny andininy faha-3 ao anatin’ilay fanapahana laharana faha 18-HCC/D3 tamin’ny 25 Mai 2018 izay navoakan’ny HCC, dia “ ireo mpikambana ao anatin’ny Fitsarana avo ihany no manao izay fandaminana rehetra ahafahan’izy ireo manatanteraka ny asany” . Voalazan’ny andininy faha-167 ao anatin’ny lalàm-panorenana mantsy fa “manao antso amin’ireo sehatra rehetra voakasika ny Filoham-pirenena hanendren’izy ireo izay solontenany handrafitra ny Fitsarana Avo”.
Araka izany dia tsy mitombina ny filazana ankehitriny fa tsy nahatanteraka ny asany ny Filoha Hery Rajaonarimampianina satria tsy nahavita nanangana ity Fitsarana Avo ity. Efa nataony mantsy ny fiantsoana ireo sehatra rehetra voakasika samy hanendry ny solontenany avy taoriana kelin’ny nandraisany ny fitondrana. Iaraha-mahalala anefa fa nandritra ny fivoriana ara-potoana faharoan’ny Antenimieram-pirenena tamin’ity taona 2018 ity vao afaka nanendry ny solotenany ny HCDDED. Ity farany izay rafitra iray notakian’ny lalàna fa mbola manana solontena ho mpikambana ao anatin’ny Fitsarana Avo ( HCJ).
Tsy misy araka izany ny lalàna milaza fa ny Filoham-pirenena no mandray ny didim-panjakana amin’ny fananganana ity Fitsarana Avo ity. Ny fanaovany izany dia midika ho fanitsakitsahana ny lalàm-panorenana izay nanaovany fianianana teo anatrehan’ny vahoaka malagasy, ka mahavoasazy azy eo anatrehan’ny lalàna.
Vola 1, 2 tapitrisa Dolara no narotsaky ny firenena amerikanina ao amin’ny kitapom-bola hiombonana amin’ny fanohanana ny SACEM mba hanampiana ny CENI amin’ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara . Nankasitraka izany fihetsika nataon’ny Amerikanina amin’ny ...Tohiny
Fikambanan’ny “Magistrat” : “Tsy miombon-kevitra amin’io fitokonana io”